FAQs | MEITI
1. MEITI ၏အခြေခံမူများမှာ အဘယ်နည်း။
မြန်မာနိုင်ငံ MEITIသည် သဘာဝသယံဇာတ တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု၊ ၄င်းကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သော အခွန်ဘဏ္ဍာ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိရေးတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရာ
တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံမှု (Accountability)
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှုမှု (National Interest)
တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ သဘောထားနှင့် အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားမှု (People – Centered)
စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Sustainability)
လွတ်လပ်စွာကြိုတင်အသိပေးညှိနှိုင်းရယူထားသည့် သဘောတူညီချက် (Free Prior Informed Consent- FPI)
စစ်မှန်သောပါဝင်မှုနှင့် အားလုံးအကျုံးဝင်မှု (Genuine participation and all-inclusiveness) တို့အပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
2. EITI ဆိုတာဘာလဲ
သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဖော်ဆောင်ရေး (EITI) ဆိုသည်မှာ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များမှ ရရှိသော ၀င်ငွေများအားပွင့်လင်းစွာဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပိုမိုအားကောင်းလာစေသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ။
3. EITI ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်အသုံးဝင်တာလဲ
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စေရန် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူဘောင် (Framework For Economics and Social Reform) ချမှတ်ကျင့်သုံးရာတွင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်များအနက် EITI လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးသည်လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ သယံဇာတများကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် လက်ရှိပြည်သူများ
သဘာဝသယံဇာတများမှ ရရှိသော နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များအကြောင်း ပြည်သူလူထုသိရှိလာခြင်းဖြင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင့်တော်ပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်လာနိုင်မည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ် တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် နေကြသော ကုမ္ပဏီများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးအုပ်ချုပ်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ တိုးတက်လာနိုင်သည်။
သဘာဝသယံဇာတများမှ ရရှိသော နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များအကြောင်း ပြည်သူလူထုသိရှိလာခြင်းဖြင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင့်တော်ပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်လာနိုင်မည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ် တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေကြသော ကုမ္ပဏီများ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ အစိုးရ၏ဘဏ္ဍာရေးအုပ်ချုပ်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ တိုးတက်လာနိုင်သည်။
သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ဖော်ထုတ်ရေးဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့( Extractive Industries Transparency
Initiative - EITI ) ၏ စံနှုန်းပြည့်နိုင်ငံဖြစ်လာသည် အထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။